Filmaata Biyyoolessaa Itophiyaarratti Ibsa ABO – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooFilmaata Biyyoolessaa Itophiyaarratti Ibsa ABO
Filmaata haqaa fi bilisaa geggeessuu haa turuutii haalli amma biyyittiin keessa jirtu sadarkaa dhumaattiillee mirgi dimokraasii (lowest standards of even illiberal democracies) akkan hin jirree dha.
Haala waggoota lama darban keessatti ta’e walakkaa isaa armaan olitti caqafame irraan kan ka’e, itti bahumsi filmaata kanaa filmaata haqaa, bilisaa fi kan hunda bakka bu’u ta’uu waan hin dandeenyeef qaamota dubbiin ilaaluu (stakeholders) biratti fudhatama hin qabu.
Yoo filmaatni kun geggeeffamellee rakkina siyaasaa gurguddoo ta’an fi waldhibdee biyyattii keessa jiru furuu irratti jijjirama inni fidu hin jiru.
Hidhamtoota siyaasaa hunda haal duree tokko malee hiikuu;
Waajjiroota jaarmota mormitoota Siyaasaa yeroo ammaa cufamanii/ tohannoo human sekuriitii warra biyya bulchaa jiranii jiran banuu;
Yeroo ammaa biyyattii guutuu keessaatti adeemaa kan jiru ummata hidhuu, dararuu fi ajjeessuu dhaabuu fi marii hunda ammate geggeessuu;
Qaamotni (Institutions) kan akka Boordii Filannoo, Mana Seeraa fi Murtii fi nagaa eegdota akka bilisa ta’an wabii kennuu;
Marii Siyaasaa (political Dialogue) kan hunda ammatee fi itti bahi isaa furmaata rakkina polotikaa biyya kanaa kan tahe akka jalqabamu taasisuu.
Ajjeechaan Dargaggoota Irratti Xiyyeffatee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru, Yaaddoon Nageenyaa Daranuu Hammaataa deemuu Agarsiisa (Ibsa…
Ibsa ABO: Oduu Gaddaa
Oduu Gaddaa Miseensota Gumii Sabaa ABO kan Hooggana Gadaa Dabree keessaa tokkoo fi qabsaawaa gameessa…
OLF Press Release Regarding Election Issues In Ethiopia